Fact Check: ရခိုင်နဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကပုံဟောင်းများကို ကရင်ပြည်နယ်မှာ လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်ခံရပုံများအဖြစ်မျှဝေ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
ကောင်းကင်မှာ တိုက်လေယာဉ်များ ပျံ့သန်းနေပုံ၊ သက်ကယ်အိမ်အချို့ မီးလောင်နေတဲ့ပုံတွေနဲ့အတူ ကရင်ပြည်နယ်မှာ မတ် ၃၀ ရက်ဖြစ်စဉ်လို့ ရေးသားမျှဝေထားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုကို ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်မျှဝေနေပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်မှာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က လေကြောင်းကတစ်ဆင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့် ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဓာတ်ပုံတွေဟာ ၂၀၂၀ အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကျေးရွာတွေမီးရှို့ခံရမှုနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်မှုဓာတ်ပုံဖြစ်ပါ တယ်။
“ကရင်ပြည်နယ်-မတ်လ ၃၀😢😢😢😢😢 ”လို့ရေးသားပြီး “Khun Thein Naing”အမည်နဲ့ဖေစ့်ဘွတ် အသုံးပြုသူက မျှဝေထားရာမှာ ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည်မျှဝေမှု ၁သောင်းကျော်ရှိပါတယ်။ တူညီစွာ ရေးသားမျှဝေမှုကို ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပထမဆုံး အိမ်လေးလုံးထက်မနည်းမီးလောင်နေတဲ့ပုံနဲ့ လူတစ်ယောက်ပါတဲ့ ဓာတ်ပုံကို အသေချာကြည့်မယ် ဆိုရင် ဓာတ်ပုံကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ ကာလဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံရဲ့အောက်ခြေမှာ “Shot on Y91 Vivo AI camera”၊ “2020424”ဆိုတဲ့ရေစာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံကို Google မှာ မှာပုံရှာနည်းအသုံးပြုပြီးရှာဖွေရာမှာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။
၂၀၂၀ မေလ ၁၇ ရက်က “Mr Jack” အမည်နဲ့ အကောင့်မှ အခြားသောမီးလောင်မှုဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦး လကာကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားသော ဖြစ်စဉ်လို့ Twitter မှာ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Burmese army sets fire to civilian villages
16-5-2020 At 2:00 pm, the Burmese
army sets fire to Lakar Village,Mrauk
U Township, Rakhine State, and 500
houses are burnt down.@UNHumanRights@UN @FortifyRights pic.twitter.com/i80xb8zMeX pic.twitter.com/BumbMw7HZ0
— Mr Jack (@MrJack93522826) May 16, 2020
မူရင်းလင်ခ့် – Mr Jack | Archive link
We lose our home. The soldiers burned down the villagers’ houses. pic.twitter.com/gMdSJrhc1N
— Ino (@KaungKa59622863) February 16, 2021
မီးလောင် ပြာကျနေတဲ့အိမ်တွေဓာတ်ပုံဟာလည်းပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
ထို့အပြင် လူတွေအထုတ်တွေထွက်ပြေးနေပြီး မီးခိုးလုံးကြီးများနဲ့ အိမ်တွေမီးလောင်လျက်ဓာတ်ပုံကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က CTN News မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဟောင်ဆောင်ရှိ မဲစုရင် (Mae Surin) ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ် လို့ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – CTN | Archive link
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ ကရင်ပြည်နယ်မှာ မတ် ၃၀ ရက်ကဖြစ်စဉ်လို့ ဖော်ပြနေတဲ့ပုံတွေဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမီးလောင်မှုနဲ့ ၂၀၂၀ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပုံတွေဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
Title:Fact Check: ရခိုင်နဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကပုံဟောင်းများကို ကရင်ပြည်နယ်မှာ လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်ခံရပုံများအဖြစ်မျှဝေ
Tagged Claim ReviewMae Surinရခိုင်